Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Mohamed Salah Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Ihe omuma anyi nke Mohamed Salah na-enye gi ihe omuma banyere akuko omuma ihe omuma banyere nwata, ndu mbido, ndi nne na nna, ezin’ulo, nwunye, umuntakiri, ibi ndu ya na ndu mmadu.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ụdị a nke Mohamed Salah's Life Story na-enye nyocha nke ihe niile a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Ee, onye ọ bụla maara na a na-ahụkarị ihe dị n'ihu dị ka otu n'ime Ndị egwuregwu Africa kacha mma n'ọgbọ ya.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akwụkwọ akụkọ Mohamed Salah, nke na-enye nkọwa zuru ezu banyere obere ihe amachaghị na ndụ ya. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Akụkọ banyere Mohamed Salah Childhoodmụaka:
Iji bido, Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly mụrụ na 15th ụbọchị nke June 1992 na obodo Nagrig na Basyoun, Egypt. A mụrụ ya na nne amachaghị na nna ya - Salah Ghaly.
Nwatakiri Salah tolitere na obodo amuru ya Nagrig ya na nwanne ya nwoke Nasr Salah. N'ezie, a maara Salah nke ọma "nwa Nagrig" na ọ bụ naanị ya ama ama bi n'obodo ahụ n'oge edere.
Na-etolite na Nagrig, nwa okorobịa Salah dị afọ 7 mgbe ọ hụrụ football n'anya. Ọ bụ egwuregwu ya na nwanne ya nwoke mere.
Na mgbakwunye, Young Salah dị ukwuu na-ekiri egwuregwu Champions League n'oge ahụ ma nwee akụkọ ifo dị ka Ronaldo onye Brazil, Zidane na Totti dika arusi-ya nile.
Ọ dị mma ịmara na Salah na nwanne ya nwoke abụghị naanị ndị hụrụ football n'anya na ezinụlọ ha. Nna ha Salah Ghaly na ndị nne na nna abụọ nwere akụkọ ihe mere eme na-egwu egwuregwu na ụlọ ntorobịa nke obodo Nagrig.
Mohamed Salah Early Life in Football - Akụkọ zuru ezu:
N'adịghị ka nna ya na nwanne nna ya, Salah anaghị edozi naanị egwuregwu ntụrụndụ nke football. Ọ maara na ịgba bọl bụ ọrụ na-atọ ụtọ nke ọ nwere ike ịgbanwe bụrụ ọrụ na-akwụghachi ụgwọ.
Ya mere, ọ bịara bụrụ ihe siri ike na isonye na egwuregwu bọọlụ maka ọgbakọ ọgbakọ Ittihad Basyoun, nwere mmekọrịta na Othmason Tanta (klọb na mpụga Basyoun) wee gaa na ịmalite ịgba aka ọrụ ịgba bọlbụ El Mokawloon (El Arab Ndị ọrụ ngo).
Afọ Ndị Mbụ na Football Football:
Ị maara na Salah dị nanị afọ 14 mgbe ọ malitere ọrụ ọkachamara ya na El Mokawloon? Dị ka nke a, e mere ya ka ọ kpọọ maka klọb n'okpuru 15 ebe talent ya pụtara.
N'ezie, otu n'ime ndị nkuzi El Mokawloon n'oge ahụ - Said el-Shishini nwere ihe ndị a ikwu banyere nkà dị ịrịba ama Salah na-eto eto:
“O nwere ikike dị ụkọ imekpa ndị otu mmegide ahụ site n'i were bọọlụ si n'etiti ubi ahụ ruo mpaghara ntaramahụhụ."
Mohamed Salah Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Nwatakịrị ahụ gbagoro n'ọkwa nke El Mokawloon n'afọ ndị sochirinụ nke mere na ọ nwere ike nweta nkwekọrịta mba ụwa nke mere ka ọ si n'ụsọ oké osimiri nke Africa na-egwu egwu na Switzerland maka akụkụ Switzerland - Basel.
Ọ bụ na Basel ka ọrụ Salah dọtara mmasị nke ndị England - Chelsea FC nke o nyere mbinye aka ya na 2014. O mere ọtụtụ ihe ngosi maka ụlọ ọrụ ahụ nke zigara ya na mbinye ego na Fiorentina na mgbe e mesịrị Roma.
Mohamed Salah Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Onye agha ahụ mechara mee nke ọma iji gosi na ọ bara uru na Roma site na iduga ha n'ọkwa nke abụọ na Serie A n'oge mbụ ya.
Kedu ihe ọzọ? ọ bụ onye nchịkọta egwuregwu kachasị elu maka oge 2015/2016. N'agbanyeghị ịbanye na 'Roma' ogologo oge, Salah enweghị ike iguzogide onyinye 'Liverpool' na 2017.
Ndị Reds mere ka ọ gbanwee site na nku nke anụ ọhịa wee gaa n'ihu. O nweghi nsogbu na mgbanwe a wee merie ọtụtụ onyinye gụnyere Premier League Golden Boot maka oge 2017/2018.
Na oge sochirinụ, Salah duru Liverpool ka ọ merie 2019 UEFA Champions League. Ngwa ngwa ngwa rue Mee 2020, Salah nwere olile anya dị elu nke ibuli aha Premier League na Liverpool.
N'ụzọ ọ bụla ihe na-aga, ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu ga-abụ akụkọ ihe mere eme mgbe nile.
Mohamed Salah Biography - Nwunye na Childrenmụaka:
Onye bụ nwunye Mohamed Salah na ụmụaka ole ka o nwere? ịmalite na ajụjụ mbụ, nwunye Mohamed Salah abụghị onye ọzọ karịa Magi Sadeq.
Di na nwunye ahụ gara otu ụlọ akwụkwọ elementrị na nke obere ebe ha zutere mbụ. Ha malitere ịlụ nwoke ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị ma lụọ na 2013.
Ọ dị mma ịmara na nwunye Mohamed Salah nwere nwanne ejima. O nwere nzere bachelọ na ngalaba nke Azụmaahịa na Alexandria ma mụtala ụmụ nwanyị abụọ maka ọganihu dị ịtụnanya. Ha gụnyere Makka (amụrụ na 2014) na Kayan (amụrụ 2020).
Ọ bụ naanị oge tupu nwunye Mohamed Salah enye ya nwa nwoke ọ ga-atụ anya ịkụzi na bọl.
Ndụ Mohamed Salah:
Dị ka Magi Sadeq, ezinụlọ Mohamed Salah abụwo akụkụ nke ike a na-apụghị imeri emeri nke na-eme ka ọ nwee ihe ịga nke ọma.
Onweghị ụzọ ọ bụla anyị nwere ike isi tinye edemede a na akụkọ akụkọ Mohamed Salah nke nwata + na-enweghị ịgụta ndị ezinụlọ ya oge na ebe ọ kwesịrị.
Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Mohamed Salah na ndị ọzọ so n'ezinụlọ na-akwado ya.
Banyere nna Mohamed Salah:
Salah Ghaly bụ nna Mohamed Salah. O nwere mmasị na football ma na-arụ ọrụ n'azụ ihe nkiri iji hụ na Salah nwere ọrụ football na-aga nke ọma.
Ka a sịkwa ihe mere ọganihu ahụ ga-eji bụrụ ihere ịghara ịja papa ya mma na-enyere ya aka ka ọ bụrụ onye nkwenkwe ụgha.
Dị ka Salah si kwuo, ọ bụ Ghaly na-akụziri ya mgbe niile na ọ dị mkpa ịchụ àjà dị ka nwatakịrị ka ọ na-eme njem maka awa 4 iji zụọ ọzụzụ.
Zute nna Mohammed Salah Ghaly.
Banyere Mohamed Salah nne:
A maghị ọtụtụ ihe gbasara nne nke super forward. N'agbanyeghị nke ahụ, o nwela akụkọ akụkọ n'otu oge maka ịkpọ nwa ya nwoke mgbe ọ makụrụ nwanyị.
Mmepe ahụ emeghị nke ọma na nne Salah nke kwenyere na n'amaghị ama merụọ mmetụta nwunye ya site na ịmakụ onye ofufe.
N'ezie, nne na nna Mohamed Salah bụ ezigbo ihe atụ nke omume na-akwalite nne na nna. Ọ bụ ha?
Banyere ụmụnne Moammed Salah:
Winger nwere nwanne nwoke nke tọrọ nke na-akpọ Nasr salah. Ha abụọ nwere mmasị n'ịgba bọọlụ ọnụ mgbe ha bụ ụmụaka mana ọ bụ naanị Salah mere ya na bọọlụ ọkachamara.
Nnyocha dị nso nke foto dị n'okpuru ebe a ga-eme ka ị kwenye na ụmụnne ndị ahụ bụ ezigbo enyi, mmepe nke na-ekwu ọtụtụ ọrụ nke nne na nna Mohamed Salah na-arụ n'ịhụ na ịhụnanya na-aba ụba n'ime ezinụlọ.
Zute nwanne Mohammed Salah nwanne Nasr.
Banyere ndị Moammed Salah:
Banyere ndị ikwu Mohamed Salah: N'ịga n'ihu na nne na nna na ụmụnne Mohamed Salah, a maghị ọtụtụ ihe gbasara nna nna ya na mgbọrọgwụ ezinụlọ ya, karịsịa dịka ọ metụtara nne na nna ya ochie, nwanne nna ya, nwanne nne ya na ụmụnne ya.
Enweghị ndekọ nke ụmụnne ya na ụmụ nwanne ya. Agbanyeghị, anyị maara na ndị iwu ya bụ Mohab, Mahy na Miram (ụmụnne Magi Sadeq).
Ndụ Mohamed nke Onwe:
Onye bụ Mohamed Salah n'èzí egwuregwu bọọlụ na kedu ụdị omume ya karịa ka ọ bụrụ nrọ nke ndị na-agbachitere ya? Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara onye winger.
Iji malite, Salah gosipụtara àgwà nke ndị amụrụ n'okpuru akara Gemini Zodiac. Ọ bụ onye nyocha, onye nwere obi ike, nke mmetụta uche ya na nwunye ya na nwa ya nwanyị, na-eche n'echiche, na-emesapụ aka ma na-emeghe ikpughe nkọwa gbasara ndụ ya na nke onwe ya.
Ọ bụ eziokwu na ndụ ya anaghị adabere naanị na football. N'ezie, mgbe ọ na-apụ apụ, ọ na-eme ụfọdụ ọrụ ndị a gụrụ dịka ntụrụndụ na ọdịmma ya.
Ha gụnyere ikiri ihe nkiri, ịkụ tenis, igwu egwuregwu vidio na iso ezinụlọ ya na ndị enyi ya na-anọrị. Echefukwala, igwu mmiri bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ kacha amasị Salah.
Igwu bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ.
Mpempe akwụkwọ a dị ogologo ma na-etinye aka na akụkọ ndụ Mohamed Salah agaghị ezu oke ma ọ bụrụ na anyị enyeghị eziokwu gbasara otu o si eme na itinye ego ya.
Iji malite na ọ bara uru karịa nde euro 15 dị ka nke May 2020. Ọtụtụ akụ na ụba Salah sitere na ụgwọ ọrụ na ụgwọ ọnwa ọ na-enweta maka ịbụ onye egwuregwu dị ịtụnanya.
Na mgbakwunye, Salah na-enweta nnukwu ego site na nkwado. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na o nwere ụlọ dị oke ọnụ na Egypt ma na-ebi n'ụlọ dị oké ọnụ ahịa na Europe. Ihe ọzọ bụ, mgbe Salah na-agba, ọ na-agba nnukwu.
Ọ nwere ọtụtụ ụgbọ ala ngwa ngwa dị egwu gụnyere Mercedes n'etiti ndị ọzọ dị ịtụnanya.
Lee onye na-egwu egwu na Mercedes.
Eziokwu Mohamed Salah:
Iji chịkọta akụkọ ndụ Mohamed Salah na akụkọ nwata, ebe a bụ obere amachaghị ma ọ bụ eziokwu amachaghị gbasara onye na-aga n'ihu.
Eziokwu # 1- Isi ugboro abụọ:
Know maara na Mohamed Salah nwere nkwenye dị a inaa na Egypt? Ọdịdị ahụ siri ike na ọdịdị-otu - onye aha ya bụ Ahmed Bahaa - nwedịrị ike ịmịpụta ihu n'ihu ma na-apụ.
Salah na Bahaa zutere laa azụ n'afọ 2016 ọbụlagodi na ọganiihu ghọrọ ihe ịtụnanya na bọọlụ bekee. Ha nọ nso kemgbe ahụ.
Nwere ike ịkọ onye bụ ezigbo Salah?
Eziokwu # 2- Njikọ ndị agha:
E nwere ihe dị na ọrụ Salah mgbe nrụgide dị na ya ịlaghachi na-eburu n'uche ịbanye ọrụ agha Egypt nke ọnwa 12.
Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na aha ya adịghị na usoro agụmakwụkwọ na UK nke a ga-eji dochie anya ọrụ ndị agha.
Ọ dabara nke ọma maka ya ndị nwere ọkwa dị elu na UK na-abanye iji nyere aka dozie okwu ahụ nke gaara ahụla na onye n'ihu ga-alaghachi Ijipt ozugbo.
Eziokwu # 3- Itufu ụgwọ ọnwa ma ọ bụrụ na atụnyere nke Amaala Nkata:
Inwe ego na paụnd Egypt (E £)
Kwa Afọ £ 10,416,000 $ 13,098,120 € 11,596,115 E £ 212,017,958
kwa ọnwa £ 868,000 $ 1,091,510 € 966,343 E £ 17,668,163
Kwa Izu £ 200,000 $ 251,500 € 222,660 E £ 4,071,005
Kwa .bọchị £ 28,571 $ 35,929 € 31,808 E £ 581,572
Kwa elekere £ 1,190 $ 1,497 € 1,325 E £ 24,232
Kwa Nkeji £ 19.8 $ 25 € 22 E £ 404
Kwa nke abụọ £ 0.33 $ 0.41 € 0.37 E £ 6.7
Nke a bụ ihe Mo Salah eritela uru kemgbe ị malitere ile Peeji a.
Ị maara?… Nwa amaala Britain nke na-akpata kwa ọnwa dị £ 585 kwa izu ga-arụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala Ọ BWRW iri afọ asatọ na asatọ irite pound 200,000 nke bụ ụgwọ ọnwa nke Mo Salah.
Eziokwu # 4- Ozugbo emegidere maka ikwe ka Onye Nwanyị nwanyị susuo ya ọnụ:
Ihe a merenụ mere mgbe ọ họpụtara Player nke Year award na Switzerland Njikọ. Ka o sina dị, mgbe onyinye ahụ gasịrị, a katọrọ Salah na mba ya maka ịkatụ nwanyị ahụ.
Nke a bụ otú Salah si zaghachi; O kwuru "Ha emebiwo ọṅụ m. Ha chefuru ihe a na-agbata n'ọsọ ma tinye uche na nwanyị na-asusu m ọnụ. "
Salah kwukwara, "N'ebe ọ bụla m na-aga ebe a na Switzerland, ndị mmadụ na-eto, ebe ndị agbụrụ m na-akatọ m."
Eziokwu # 5- Fim FIFA:
Ndị ukwu na football nwere ọkwa FIFA dị egwu nke na-eme ka ha dị iche na ndị ọzọ. Nke a bụ eziokwu maka Salah onye ọkwa ya n'ozuzu ya guzoro na 90 n'oge edepụta akụkọ ndụ a. Ọ na-ekerịta ọkwa dị elu na Sadio mane onye nwekwara ihe ruru 90.
Mohammed Salah Bio - Nchịkọta:
Akụkọ banyere Mohamed Salah - Wiki Data
Aha n'uju Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly
aha otutu Onye Egypt Messi
Ụbọchị ọmụmụ Ụbọchị 15th nke June 1992
Ebe amụrụ onye Nagrig na Basyoun, Egypt.
Age 27 (ka nke ọnwa Mee 2020)
Nna Salah Ghaly
Nne Nasr Salah
Nwunye Magi Sadeq
Children Makka (amụrụ 2014) na Kayan (amụrụ 2020)
omume ntụrụndụ Ikiri ihe nkiri, igwu egwu tebụl ma na-egwu egwuregwu vidio.
elu 5 ụkwụ 9 sentimita
Leba anya Ahmed Bahaa
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị nwere nghọta na akụkọ ndụ Mohamed Salah. Na Lifebogger anyị na-ahụ mgbe niile na akụkọ nwata anyị na akụkọ ndụ anyị bụ eziokwu Ndị egwuregwu bọọlụ Afrịka a na-agwa ya nke ọma na izi ezi.
Ị dị mma ịdọrọ uche anyị gaa na ihe ọ bụla na-adịghị mma site na iji igbe nkọwa.
Claudilene Ayres na Silva
Boa biografía, uma pena o fato de não citarem que ele é muçulmano. Aliás, parece um pouco preconceituoso, pois foi por essa razão, alguma crítica que ele sofreu por ocasião do prêmio na Suíça. Mas eu concordo com o Salah, deviam se importar mais com o prêmio do que com a atitude da apresentadora que afinal não era sua culpa. E é por ser muçulmano também, que ele se casou “cedo”, segundo o vosso pensamento. Mas o que importa, é que Mohamed Salah, é hoje e pelos próximos anos, o melhor jogador do mundo! Masha'a'Allah! E ainda é um orgulho... GỤKWUO "
Edeziri ikpeazụ 1 afọ gara aga site na Claudilene Ayres da Silva
Nwoke a mere oge ikpeazụ ọ bụla na onye ọ bụla na-ekwenye na arụmọrụ ya. Ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu a hụrụ n'anya n'ofe kọmpi niile.
Ndị nne na nna na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime ka ụmụ ha nwee ihe ịga nke ọma. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị egwuregwu niile nwere ihe ịga nke ọma nwere nne ma ọ bụ nna ha dịka onye nchịkwa ma ọ bụ onye egwuregwu bọọlụ gara aga. Ọ dị mma mgbe niile ịhụ ụmụaka ka ha na-eme nke ọma n'ihe ị masịrị gị.
Ọ lụrụ nwanyị mgbe ọ dị obere, ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụ eziokwu na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-agba ụkwụ ụkwụ na-alụ di na nwata. Ka o sina dị, ọ bụ nnukwu onye ọkpụkpọ, nwere oke ije.
Ihe omuma a Salah. Echeghị m na Salah si ebe dị anya bịa. N'ezie ọ bụ talent. N'ezie n'ọsọ ya, anyị na-atụ anya na ọ gafere ndị agbachitere ọ bụla na-abịa oge ọzọ. Enweghị mgbagha ọ bụla!
Salah nwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta n'aka ya. N'ezie, na oke ịdọ aka ná ntị, ọ na-akwali m.
Salah enweela ọganihu n'ọrụ ya kemgbe ọ bụ nwata. Site na ihe anyị na-ahụ n'oge ọ bụ nwata, ọ na-atụ anya ka ọ ga-esonyere n'ụbọchị ikpeazụ. O gosipụtawo ya. Ọ bụ n'ezie onye na-egwu egwu
Ọ bụ akụkọ ịtụnanya. Amaghị m na ọ natara ọzụzụ agha. Ọ pụtara na n'Ijipt, ị ga-enwerịrị ọzụzụ agha?
Salah nwere ohere iji nwee ọganihu ọbụna karịa na ụlọ ọrụ bọlbụ. Ọ nwere ihe dị ịtụnanya banyere ndụ onwe ya ma kọwaa ma gosipụta ikike ọ nwere.
Ọ dị mma ịhụ Salah nwere ezigbo ndụ ezinụlọ. Dị dịka akụkọ ya. Ọ rụsie ọrụ ike iji ruo ọkwa ọ bụ.
Salah bụ ezigbo ndị ịgba ọsọ ụkwụ. N'ime afọ ole na ole sochirinụ, ọ ga-emeri ọtụtụ trophies. Ya na Liverpool nwere oge magburu onwe ya na anyị na-atụ anya na otu ka mma.
Anurum na asughari okwu banyere ala enweghi ebe obibi na ya na mo elneny (arsenal) biri, obu eziokwu. Ulo salah nwere ulo nke ya, o buru na o mee obodo nke bu. dị